काठमाडौमा बसपार्क नै नराख्ने महानगरको निर्णय, सवारी साधनले दौडिराख्नुपर्ने – Sandesh Press
काठमाडौमा बसपार्क नै नराख्ने महानगरको निर्णय, सवारी साधनले दौडिराख्नुपर्ने
June 30, 2021 321
काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले बसपार्क नै नराख्ने निर्णय लिएको छ ।खुल्लामञ्चस्थित बसपार्क हटाएर सबै सवारी साधनलाई दौडिराख्नुपर्ने (पिक एण्ड ड्रप) प्रणालीमा सञ्चालन गराउने महानगरको निर्णय छ ।महानगरको यो निर्णयसँगै अब साना तथा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनहरु शहरी क्षेत्रमा लामो समयसम्म एकै स्थानमा रोकिन पाउने छैनन् ।यसका साथै उनीहरुले खुल्लामञ्चमा सवारी पार्किङ समेत गर्न पाउने छैनन्।
उनीहरुले बाटोमा जो भेटिन्छन् लिन र दौडिने गर्नुपर्नेछ । रोकिएर बसेको खण्डमा कारबाही हुनेछ ।काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्क हटाएर काठमाडौं टावर निर्माण गर्न थालेपछि बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा सारिएको थियो।
खुल्लामञ्च अतिक्रमणमा पर्यो भन्ने गुनासो आएपछि महानगले त्योपनि हटाउने भएको छ । लामो समय पार्किङ्ग गर्नुपरेमा काठमाडौं टावर निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक पार्किङ्गमा शुल्क तिरेर सवारी राख्नुपर्नेछ ।
अहिले खुल्लामञ्चबाट पनि बसपार्क हटाएपछि यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले महानगरपालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।महानगरपालिका र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि तथा मजदुरका प्रतिनिधिहरुबीच मंगलबार भएको छलफलमा एनएसी आसपास, न्युरोड गेट अगाडि र वीर अस्पताल अगाडिको रोडमा नै पिक एण्ड ड्रपको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको नगरप्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसो हुँदा उक्त क्षेत्र भने निक्कै व्यस्त हुनेछ । त्यसैपनि जाम हुने स्थानले अब झनै सवारी जाम खेप्नुपर्ने हुन्छ ।‘साविकमा काठमाडौं महानगरपालिकाकाले सञ्चालन गरेको पुरानो बसपार्क भएको स्थानमा काठमाडौं टावर बनिरहेको छ । त्यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि बसपार्क नै बन्ने हो ।
त्यसलाई हामीले अस्थायी रुपमा खुलामञ्चमा सिफ्ट गरेका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खुल्लामञ्चलाई अहिले खुल्लामञ्चकै रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यहाँबाट सञ्चालित बसहरुलाई पुरानो पिक एण्ड ड्रप पद्धतिमा सञ्चालन गर्नका लागि हामीले व्यवसायी साथीहरुसँग बसेर छलफल गर्‍यौं ।’
अब खुल्लामञ्ज कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नका लागि खुल्ला हुनेछ । बसपार्कदेखि शान्तिबाटीका सम्म खुल्ला हुनेछ । जे कार्यक्रम र बिरोध गर्नुपरेपनि त्यहाँ मात्र गराइनेछ ।
Prevअचानक फेरि आयो यस्तो खबर, पुजाले भनिन आकाश सँगको सम्बन्ध तोड़ियो (भिडियो सहित)
Nextट्रायल पास गर्न सक्नुभएको छैन ? अब आयो यस्तो सजिलो नियम
आज आइतबार चम्किदैछ यी ७ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
कुवेतको नेस्टो सुपरमार्केटमा ठूलो संख्यामा नेपाली महिला-पुरुषलाई रोजगारको अबसर, तलब कति ?
स्वास्थ्य सहायता बो’केर अष्ट्रेलियाली रक्षा मन्त्रालयको जहाज काठमाडौंको लागि उड्यो
विवाह गरेको ९ महिनामै यति सुन्दर श्रीमती सिध्याए अजयले